Atụmatụ 10 Na-adịghị Na Blog Gị | Martech Zone
Atụmatụ 10 Na-adịghị Na Blog Gị
Tuesday, July 21, 2009 Tọzdee, Eprel 28, 2016 Douglas Karr
Ụfọdụ n'ime nzaghachi m natara n’aka ndị na-agụ akwụkwọ bụ na anaghị m enye ọtụtụ nzaghachi gbasara ịde blọgụ Martech Zone. Ya mere - taa, echere m na m ga-ewere ụzọ dị iche ma lee teknụzụ dị gburugburu mmemme ịde blọgụ gị iji nye ndị na-agụ akwụkwọ ndepụta atụmatụ iji nyochaa ma hụ na blọgụ ha nwere.
Robots.txt - Ọ bụrụ na ị gaa na mgbọrọgwụ (isi okwu) nke ngalaba gị, tinye robots.txt na adreesị. Ihe Nlereanya: https://martech.zone/robots.txt - enwere faịlụ ebe ahụ? A robots.txt faịlụ bụ isi ikike faịlụ na-agwa a search engine bot / ududo / crawler ihe directories na-eleghara na ihe directories iri ari. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịgbakwunye njikọ gị na saịtịmap gị n'ime ya! Enweghị otu? Mepee ederede ma ọ bụ ederede ederede ma mee ya n'onwe gị… naanị soro ntuziaka ndị dị na ya Robotstxt.org
Sitemap.xml - Ihe ngosi saịtị emeputara ngwa ngwa bu ihe mejuputara nke na - enye engines ọchụchọ map nke ebe ọdịnaya gị dị, otu ọ dịruru mkpa, na mgbe ikpeazụ gbanwere ya. Site na igwe nzipu kachasị mma nke m jiri mee ihe Arne Brachhold si XML Sitemap Generator. Ọ na-enyefe saịtị ahụ ka Live / Bing, Yahoo !, Google na Jụọ! (mgbe ajuọ nrubeisi na-arụ ọrụ).
Nlekọta mgbasa ozi - Enwere m ndepụta zuru ezu nke saịtị ebe ị nwere ike ịhụ m ka m na-ekere òkè na mgbasa ozi mmekọrịta. Cheta - blọọgụ gị abụghị mgbe mmadụ na-aga! Mgbe ụfọdụ ịkparịta ụka n'inntanet na mgbasa ozi mgbasa ozi na imeta ndị nwere ọdịmma ọnụ nwere ike inye aka kwalite blog gị na ndị na-ege ntị dị mkpa… kwụsịrị blog gị. N'elu aka nri aka nri, ị ga-ahụ ọtụtụ saịtị ebe ị nwere ike ịchọta m! Jide n'aka tinye m dị ka enyi, aga m eweghachi ihu ọma.
Ekwentị Ndakọrịta - Ojiji eji eji intaneti eme ihe na-eto eto! Enwere ike ịgụ blog gị na ihuenyo mkpanaka? Maka WordPress, enwere ezigbo WordPress Mobile Plugin nke na-eme saịtị kachasị maka mkpanaka yana ọbụna iPhone Safari ojiji.
Description - Ọ bụrụ na m rutere n’otu n’ime ibe peeji gị nke blọọgụ gị, m ga-amata ihe ọ bụ? Mgbe ụfọdụ, ọ na-esi ike ịkọ naanị site n'ịgụ post. Inwe ọmarịcha nkọwa na sidebar gị ụdị ụdị ọdịnaya ị nyere nwere ike ịdị mkpa iji mee ka ndị na - agụ akwụkwọ denye aha ma ọ bụ laghachi.
Kpọtụrụ Ụdị - O juru m anya na ọnụ ọgụgụ nke blọọgụ na-enweghị ihe ọ bụla na mpụga ebe a na-aza ajụjụ iji kpọtụrụ blogger! Have nwere njikọ njegharị nke na-arụtụ aka na Formdị Kpọtụrụ? Formsdị kọntaktị adịghị emetụta karịa nọmba ekwentị ma ghara itinye gị n'ihe egwu dịka ịhapụ adreesị ozi-e.
Banyere Peeji - arenye ka ị bụ na gịnị mere m ji tụkwasị gị obi? Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-eche na-atọ ọchị dee a na peeji nke na-ekwu okwu gị rụzuru… ọ bụghị n'ihi na ị, ọ bụ n'ihi na ndị ọbịa. Nye ha nduzi ụfọdụ banyere ihe kpatara ha ji kwesị ige gị ntị.
Ihe ngosi - Site na nbudata nke ihe nchọgharị, ọ dị mfe ịkọwapụta blog gị site na itinye akara ngosi. Ọ bụrụ na ị maghị etu, jiri naanị a Onye na-eweta Favicon iji mee ico (akara ngosi) faịlụ ma bulite ya na ndekọ mgbọrọgwụ nke weebụsaịtị gị. Enwere ike iji faịlụ onyonyo ndị ọzọ, ma ọ bụ onyonyo ma ọ bụ akara ngosi anabatara ebe ọzọ - melite ya ụzọ mkpirisi akara ngosi ke nkụnye eji isi mee gị.
Disclaimer - Eeh, enwere ike ịgba gị akwụkwọ maka ihe ị bipụtara na blọgụ gị. Chebe onwe gị na ihe onwunwe gị site n'ịhụ na ị nwere nnukwu disclaimer!
Mmekọrịta Social Media - Zipu site na Twitter na Hootsuite, LinkedIn, email na ndebanye aha, Facebook na syndication bụ ngwaọrụ dị ike, jiri ụkọ ka ọ kacha ikike!
Tags: banyere peejinkọwa blogkọntaktị ụdịdisclaimericonmobile echicherobots.txtSitemapbọtịnụ ndị na-elekọta mmadụmgbakwunye mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Kpuo na Compendium Blogware?
Nne nke Dlọ data niile
Jul 22, 2009 na 3: 58 AM
Daalụ maka njikọ na nnukwu ndepụta nke ndụmọdụ. Have nwere ezigbo isi okwu gbasara nkọwa na ngachapụ. aga tinye ya na blọọgụ m 🙂.
Jul 22, 2009 na 5:13 PM
Nke a bụ ezigbo ndepụta. Enwere m edemede dị egwu na-agbanye n'otu isiokwu ahụ, aga m atụgharịa ụfọdụ n'ime ha yana jikọta maka akwụmụgwọ n'ezie.
Jul 22, 2009 na 11:32 PM
N’oge na-adịbeghị anya, ekwuru m banyere otu o si sie ike ịchọta ozi kọntaktị na blọọgụ ma enweghị m ike ikwenye na gị. Gịnị bụ nnukwu ihe? Ekem - oops - Achọpụtara m na enweghị m ụzọ dị mfe ma gbakwunye ya.
Aha Anne Simons
Jul 23, 2009 na 2:29 PM
Ọtụtụ ndụmọdụ dị mma ebe a, na ezigbo 'nyocha' maka ndị na-ede blọgụ. Daalụ!
Ashish @ Magik Gburugburu
Jul 14, 2011 na 6: 58 AM
Ndụmọdụ mara mma Douglas, echere m na ị kwesịrị ịgbakwunye ihe ndị a na robots.txt gị
Mbido # Crawlers
Onye ọrụ n'ụlọnga: *
Igba ọsọ-oge: 10
# Ngwa Wayback igwe ntanetị
Onye ọrụ-n'ụlọnga: ia_archiver
# digg enyo
Onye ọrụ-ụlọ ọrụ: duggmirror
Lelee ihe ndekọ gị na disallow ndị a ududo n'ihi na ha na-ezu ohi gị bandwit ma mee ka saịtị gị adịghị maka ndị ọbịa maka obere oge.